swamianoopam, Author at Kavyalaya - काव्यालय
by swamianoopam १७ साउन २०७७
written by swamianoopam
शायद ग्रीक मिथोलोजीमा हुनुपर्छ, मान्छे आनन्दको जिन्दगी बिताइरहेका थिए । रोग थिएन, शोक थिएन, भोक थिएन । यी सारा विषाद एउटा बाकसमा बन्द थिए जसको रक्षा इपिमिथसले गरिरहेको थियो । एक दिन उसलाई कतै जानुपर्यो । जान लाग्दा बहिनी पान्डोरालाई दाजु इपिमिथसले भन्यो, “बहिनी । यो बाकस नखोल्नु है…” त्यसो भनेकै भएर पान्डोरालाई त्यो बाकस खोलौँ खोलौँ लाग्यो र उसले त्यो खोलीदिई । बाकसबाट दुख, रिस, राग, शोक, रोग, भोक सबै बाहिर निस्किए र संसारमा व्याप्त भए । बाइबलमा त्यस्तै अर्को कथा छ । ईश्वरले पहिला मानव आदम र इभलाई भनिदिए, “त्यो एउटा रुखको फल नखानु है । बाँकी जे गर्नु छ गर्नु ।” उनीहरूले त्यही रुखको फल चाहिँ खाइदिए ।
कपडाभित्र हामी सबै नाङ्गै छौँ । सबैलाई थाहा छ यो । जन्मिँदा हामी नाङ्गै जन्मिएका हौँ । भगवानलाई, प्रकृतिलाई हाम्रो नग्नता स्वीकार्य भयो । तर हामी प्रकृतिभन्दा, भगवानभन्दा बाठा भएर निस्कियौँ । अनि हामीले जाडो, गर्मी छल्न मात्र लगाएको लुगालाई इज्जत र प्रतिष्ठा, अस्मिता र मर्यादासँग जोड्यौँ । नग्न शरीरमा त्यस्तो खासै केही छैन । तर लुकेको कुरामा, नगर्नु भनेको कुरामा, नहेर्नु भनेको कुरामा मान्छेको चासो नयाँ हैन । अर्को व्यक्तिको कपडा भित्रको नग्नता वर्जित विषय हो भनेको भएरै मान्छे एक अर्कालाई आँखैले नंग्याउँछन् । कस्तो दुखको कुरा !
मान्छेको जिन्दगीको अधिकांश समय अर्को व्यक्तिको नाङ्गो शरीर कस्तो होला भन्ने कल्पना गरेरै खेर जान्छ । हाम्रा युवाहरू फेसबुकको आविष्कार गर्दैनन् । हाम्रा युवाहरू यात्रा गर्दैनन्, हाम्रा युवाहरू खोज र अन्वेषण गर्दैनन् । बरु कस्तो हुँदो हो युवतीको नाङ्गो शरीर भनेर कल्पना गर्छन् । सोध्न मिल्दैन ओइ तिम्रो शरीर कस्तो छ भनेर । अनि लुकेर हेर्ने प्रयास गर्छन् । चोरेर हेर्ने प्रयास गर्छन् । जो-जतिले जाने र बुझे, उनीहरूले बुझे- लोभलाग्दो खासै केही त्यस्तो छैन नग्न मानव शरीरमा भनेर । उनीहरू वासना र अनेक कुण्ठाबाट मुक्त भए । र आफ्नो उर्जा सिर्जना र आविष्कारमा लगाउन पाए । पश्चिमले यो सौभाग्य पायो ।
मेरा युरोपेली र अमेरिकी साथीहरूमा नग्न शरीरप्रति त्यस्तो आकर्षण छैन । त्यो आकर्षणले गर्दा मनमा नासुर भएर गाडिएका कुण्ठा छैनन् ।
खाँदाखाँद टेम्पुमा म चाबहिलबाट रत्नपार्क जाँदै थिएँ । एउटी केटी ढोकामा तेर्सिएर झुण्डिएकी थिइन् । ढोका छेउको सिटमा बस्नु भएका एक सज्जन टिसर्ट माथि र प्यान्ट तल भएर देखिन पुगेको केटीको अन्डरवेयरमा चोर नजरले आँखा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो । मलाई वहाँ सज्जनको माया लागेर आयो । जिज्ञासा गलत हैन । जिज्ञासा दबाएर राख्न सिकाउने समाज गलत हो । पचासको उमेरमा केटीको अन्डरवेयर प्रतिको चोर आकर्षण ! उपनिषदको रचना गर्ने हाम्रो सभ्यताको यो दुरावस्था ! वहाँले शायद चित्त बुझ्ने गरी न आफ्नो जवानीमा न यो उमेरमा पर्याप्त नग्न शरीर देख्न पाउनु भयो । मन परेकी केटीको न हात समाउन पाउनुभयो न मन परेको ओठ चुम्न पाउनुभयो । त्यो सबै त खराब हो नि । जिज्ञासा खराब हो । चाहना खराब हो । दबाउनु पर्छ ती सबै । बरु चोर आँखा ठिक छ । चोर नियत ठिक छ । सोध्ने, माग्ने कल्चर त्यसैले विकास नै भएन हामीकहाँ । त्यसैले चोर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो ।
सोध्नु माग्नु गलत हैन बरु । चोर्ने, लुट्ने नियत हिँसा हो । एउटा पुस्ताले त विपरित लिंगीलाई अप्रोच गर्ने कल्चर देख्नै पाएन । कमसेकम अहिले अप्रोच गर्ने कल्चरको विकास भएको छ केही वर्गमा । मेरा धेरै केटा-केटी साथी छन् जो डेटिङ कल्चरमा मज्जाले स्वाभाविक भएका छन् । उनीहरू आफूलाई कोही मन परे सभ्य भएर अप्रोच गर्छन् । शारीरिक संसर्ग उनीहरूका लागि ठूलो कुण्ठाको विषय हैन । विपरीत लिंगीको नग्न शरीरप्रति उनीहरूको मनमा त्यसैले त्यस्तो हिंस्रक कुण्ठा छैन । म ढुक्क भएर भन्न सक्छु, ती दिन रात के होला कसैको कपडाभित्र भनेर चिन्ता गर्दैनन् । त्यसैले ती आ-आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल छन् । रचनात्मक छन् । सिर्जनशील छन् । शारीरिक आवश्यकताको पुर्ती सम्भव छ । जब शरीरको आवश्यकता पूर्ती हुन पाउँदैन र जब त्यो कमीले मनमा प्रवेश गर्छ, त्यो डरलाग्दो र फोहोर कुण्ठा बन्छ । बलात्कार त्यसैले हुन्छन् । यौन हिंसा त्यसैले हुन्छन् ।
म गोवामा थिएँ केही समयका लागि । त्यहाँ मेरा केही फिरंगी साथी थिए । एउटा थियो बेन्जामिन, अर्को थियो जोन । एउटी थिई मराइका । मराइका थिई लेज्बियन । कोही केटी मन परे सभ्य र विनम्र भएर भनिदिन्थी, “तिमी मलाई मन पर्यौ । के हामी डेट गर्न सक्छौँ ।” उसको अप्रोच गर्ने मायालु र सभ्य तरिकाले गाली र कुदृष्टि पाउँदैन थियो । बरु कतिपल्ट स्ट्रेट केटीहरू नै पनि ऊसँग डेट जान तयार हुन्थे । जर्मन जोन त अझ एक कदम अघि । ऊ कोही केटी मन परे गएर सोध्थ्यो, “हाइ.. । के हामी सँगै सावर लिन सक्छौँ ?” अप्रोच मन परे ठिक छ । मन नपराउनेले पनि विनम्र भएर ‘नो’ भन्न पायो । सोध्नेले पनि नरिसाई ‘इट्स अल राइट’ भन्न पायो । उसले गाली खाएको कहिल्यै मैले देखिनँ । यो देखेर म झस्किएँ । हामीकहाँ खै कसैलाई अप्रोच गर्ने कल्चर ? कोही राम्रो लाग्यो भन्न नपाउने ? मनका कुरा सभ्य र विनम्र भएर निर्धक्क भन्न नपाउने ? त्यसैले हामीकहाँ धेरै यौन हिंसा हुन्छन् ।
जोन भन्थ्यो, युरोपमा प्राय सपरिवार नग्न भएर साथै स्नान गर्छन् । नाङ्गो शरीर कस्तो होला भन्ने वासना हुँदैन उनीहरूमा । उनीहरूले कसैलाई अप्रोच गर्दा वासना भन्दा प्रेम प्रवल हुन्छ त्यसैले । यो सबै बुझेको मेरो एउटा नेपाली साथी भन्छ, म आफ्नो घरमा न्युड डे मनाउने योजना गर्दैछु आफ्ना साथीहरू बोलाएर । तँ पनि आउँदा हुन्छ । हाम्रा कुरा बुझ्ने थोरै मान्छेहरू बोलाउने । न्युड भएर दिनभर बस्ने । मनका हजार विकार स्वतः बिलाएर जान्छ अनि ।
बेन्जामिन र म अन्जुना बीचमा छालहरूको रमाइलो हेर्दै बसिरहेका थियौँ । आँखामा राख्दा नबिझाउने, हेर्दा सुपर मोडलजस्तो देखिने, मुर्ती जस्तो सुन्दर शरीर भएको मृदुभाषी पोर्चुगीज बेन्जामिन । कुरै कुरामा उसले भन्यो, “आइ लाइक वुमेन हु वेयर्स सेक्सी अन्डरवेयर..” यसरी भन्यो, बालसुलभ निश्छलताका साथ ! म छक्क परेँ यस्तो कुरा उसले यस्तो सरलताका साथ भनेको देखेर । हामीकहाँ कसैले यस्तो भनेको भए शायद उसलाई बोका भनिन्थ्यो वा यस्तै केही भनिन्थ्यो । फोहोरी भनिन्थ्यो । छाडा भनिन्थ्यो । तर खास मन पर्ने चाहिँ सबैलाई नै हो सेक्सी अन्डरवेयर । लगाउन, हेर्न, फुकाल्न । सबैले मनको चोर कुनामा दबाएर राख्यौँ यो कल्पना । अनि बुढो हुन्जेल यही कुण्ठा मनमा पालेर चोर दृष्टि लगाउँदै हिड्यौँ अरुका अन्डरवेयरमा । बेन्जामिनको कुराले मेरो आफ्नै मनको एउटा गाँठो फुकाइदियो ।
इट्स ओके टु से- आइ लाइक वुमेन हु वेयर सेक्सी अन्डरवेयर । इट्स ओके टु पोलाइटली अप्रोच इफ यु लाइक एनिबडी ।
दुई भिक्षु नदी पार गर्न लाग्दै थिए । एउटी स्त्री पनि त्यही चाहका साथ त्यहाँ आइन् । पहिलो भिक्षुले आफ्नो काँधमा बोकेर स्त्रीलाई नदी पार गरायो । दुवै भिक्षु नदी पार भए । स्त्री आफ्नो बाटो लागिन्, भिक्षु आफ्नो बाटो लागे । धेरै पर पुगेपछि दोश्रो भिक्षुले पहिलो भिक्षुलाई भन्यो, “तिमीले स्त्रीलाई आफ्नो काँधमा बोक्यौ । अब तिमीलाई पाप लाग्छ…”
पहिलो भिक्षुले भन्यो, “मैले त उसलाई त्यहीँ छाडेको थिएँ । तिमी अझै उसलाई बोकेर हिँडिरहेका रहेछौ ।”
मलाई त्यो दोश्रो भिक्षु बन्नु छैन ।
१७ साउन २०७७0comment
by swamianoopam २७ असार २०७७